ကျနော်တို့ Androidsis အတွက်သရေကျနှင့်အတူဤအမှု၌, ပြန်လာ UMI Emax Mini Giveaway, un အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသရေကျ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်၊ Android Lollipop ပါသည့် terminal တစ်ခုလုံး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Snapdragon 615 ပရိုဆက်ဆာနှင့်2Gb RAM တို့ပါဝင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်မည်သည့်နိုင်ငံမှလာပါစေသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်တွင်အပိုဆောင်းကုန်ကျမှုမရှိပါ။
ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Android terminal အကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကသင့်အားကြည့်ရှုရန်အကြံပေးလိုပါသည် ကျွန်တော်တို့ Androidsis မှာမနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့ဗီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ ပြီးရင်ရုံနှိပ်လိုက်ပါ «ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ» ပါ ၀ င်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည် UMI Emax Mini Giveawayစက္ကန့် ၃၀ ထက်ပိုမကြာသောသင်နှင့် UMI Emax Mini ကိုအပြည့်အဝအနိုင်ရနိုင်သည့်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။
1 UMI Emax Mini raffle တွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
1.1 ငါ Androidsis ကြိုက်နှစ်သက်လိုက်နာပါ
1.2 ငါ Antelife ကြိုက်တယ်လိုက်နာပါ
2 UMI Emax Mini raffle စည်းမျဉ်းများ
3 ငါတို့မှာအောင်မြင်တဲ့သူဂုဏ်ယူပါတယ် !!
4 UMI Emax Mini ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
5 UMI Emax Mini Image Gallery
UMI Emax Mini raffle တွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်ချက်များ
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များ UMI Emax Mini အတွက်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ် ၎င်းတို့သည် Facebook အကောင့်ဖွင့်ထားရုံသာမကဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာသည်။
စာမျက်နှာ၏နောက်လိုက်ဖြစ်လာပါ Androidsis Facebook အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ Antelife Facebook အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှတင်သောချွေတာမှုများမျှဝေပါ ဘာကြောင့် UMI Emax Mini ကိုအနိုင်ရချင်ပါသလဲ။
ငါ Androidsis ကြိုက်နှစ်သက်လိုက်နာပါ
ငါ Antelife ကြိုက်တယ်လိုက်နာပါ
UMI Emax Mini raffle စည်းမျဉ်းများ
El သရေကျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် Androidsis ကပေးဆောင်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ။
မဲနှိုက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သည် ဤစာမူကိုထုတ်ဝေသောနေ့မှ ၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့အထိည ၁၂ နာရီအထိဖြစ်သည် စပိန်အချိန်၊ GMT +1 ဥရောပအလယ်ပိုင်းစံချိန်။
Sလိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီသောသင်တန်းသားများကိုသာရေတွက်လိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာ Androidsis နှင့် Antelife တို့၏ Facebook ၏နောက်လိုက်ဖြစ်လာသည်။ Facebook တွင် raffle ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုကိုမျှဝေပါ။ ဆိုလိုသည်မှာဤ post မှာပင် Androidsis ၏ Facebook နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ UMI Emax Mini ကိုအနိုင်ရချင်တယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး စီသည်မဲနှိုက်ခြင်းတွင်တစ်ခုတည်းပါ ၀ င်ရမည် ဒါကြောင့်အနိုင်ရဖို့ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းမရရှိနိုင်တဲ့အတွက်မှတ်ချက်မျိုးစုံမလုပ်မိအောင်ရှောင်ပါ။
အနိုင်ရသူသည် Androidsis မှ ၁၂ နာရီအတွင်းပေးပို့သောအီးမေးလ်ကိုတုံ့ပြန်ရမည် သင်အနိုင်ရသူအဖြစ်အတည်ပြုရန်နှင့်ပို့ဆောင်ပေးသည့်လိပ်စာကိုဖော်ပြရန်အထက်ပါအီးမေးလ်ကိုသင်ချက်ချင်းလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သင်သည်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းသင်တုံ့ပြန်မှုမရှိပါကအခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအနိုင်ရရှိသူကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်။
အနိုင်ရသူကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့် Androidsis ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်သရေကျမည့်ရလဒ်တွင်ကြေငြာလိမ့်မည်ထဲမှာ တွစ်တာ Androidsis အဖြစ်ကောင်းစွာမှတဆင့် ဒီတူညီတဲ့ပို့စ်၏ update ကို.
အနိုင်ရသူထံသို့ပေးပို့မည့် terminal သည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာသုံးသောအတူတူပင်ဖြစ်သည် Androidsis ပါ အတွက် ၎င်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ UMI Emax Mini ဖြစ်သည် အသစ်စက်စက်သည်အပတ်အနည်းငယ်အကြာ၌နက်ရှိုင်းစွာဆန်းစစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
UMI EMax Mini ၏အသစ်စက်စက်ဆုရသည် အန်တိုနီယို Castellano Cantero ဗလင်စီယာမှ။ တဖန်ဂုဏ်ယူပါတယ် UMI Emax Mini သည်သင့်အိမ်သို့သွားနေပြီဖြစ်သည်.
ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
UMI Emax Mini ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
UMI Emax Mini Image Gallery
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ပြိုင်ပွဲ » UMI Emax Mini Giveaway
ဤနည်းပါ ၀ င်ရန်အလွန်မိုက်မဲသည်။ Gleam.io ပိုကောင်းအသုံးပြုခြင်း ...
twitter ကလား feisbuk ကိုလောင်းခြင်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းနေပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထက်ဝက်ခန့်သည်ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်အကောင့်မရှိတော့ပါ
ဆာဂျီယိုအန်ဒရီ Romero ဟုသူကပြောသည်
ပြစ်တင်ဝေဖန်မည့်အစားအခမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအနိုင်ရသည့်အတွက်သင်ကျေးဇူးတင်သင့်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါကသင့်အပေါ် မူတည်၍ မှတ်ချက်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်မည်မျှဆိုးဝါးနိုင်သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဘယ်လိုပဲရှိပါစေ၊ မိုဘိုင်းကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်၊ ငါ့ရဲ့ moto g 1st gn ဟာငါ့အတွက်အရာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီ။
Sergio André Romero ကိုပြန်ပြောပါ
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဘယ်တော့နှိုက်ဆွဲရမလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ပုံရသည်၊ ၎င်းသည်အလွန်လှပသည်၊ ကောင်းမွန်သောဗေဒရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသော terminal တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အခြေခံ xD ဆဲလ်တစ်ခုရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။
Alan Cornelio အားပြန်ပြောပါ
ငါကအနိုင်ရချင်တယ်၊ အဲဒါကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာလိုက်လျောညီထွေရှိမယ့်ဒီဇိုင်းပါတဲ့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စျေးနှုန်း - စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးအပြင်အပြင်မော်ဒယ်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုငါတကယ်သဘောကျတယ်။
Francisco Rodriguez ကိုပြန်သွားပါ
giveaway အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်တန်းသားအားလုံးအားကံကောင်းပါစေ။
Silvestre Benavente Macanas ဟုသူကပြောသည်
Silvestre Benavente Macanas အားစာပြန်ပါ
ကေတီ Martinez hernandez ဟုသူကပြောသည်
Katy Martinez Hernandez အားပြန်ပြောပါ
Javier Beltran Carceller ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတဲ့ giveaway ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Javier beltrán Carceller အားပြန်ကြားပါ
ဂျာမန် Fco ဂျာမန် ဟုသူကပြောသည်
မက္ကဆီကိုတွင်တွေ့ရခဲသောအလွန်ကောင်းသော terminal သည်၎င်းသည်နေ့စဉ်အလုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကြောင့်၎င်းကိုငါရယူချင်သည်။
J Fco Germánအားစာပြန်ပါ
မည်သူမဆိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်သောသူမပါ ၀ င်သင့်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများအတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုအနိုင်ရချင်ပါသည်။ ဤ UMI သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။
အဆိုပါ raffle အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် iOS (ကျွန်ုပ်အလွန်စျေးပေါသော ၀ ယ်ခဲ့သော iPhone ကိုသုံးပြီး) နှင့် Android အတွက်နောင်အနာဂတ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေနှင့် (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုလေ့လာသည်) အတွက်သတင်းရရှိနိုင်ရန်အနိုင်ရလိုပါသည်။ နှင့်မာလ်တီမီဒီယာနည်းပညာ) ဤအခွင့်အရေးကိုရရှိရန်အလွန်အကျိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ! … AndroidStudios အဘယ်ကြောင့် Umi Emax Mini ကိုလိုချင်ပါသနည်း။ အရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ကောင်းသည်၊ ခေတ်မီသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအိပ်မက်မက်ခဲ့သည်၊ အိပ်မက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများ၊ ကင်မရာ၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးတို့သည်အလွန်ကောင်းသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကလက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်အနိုင်ရမည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။
အော်စကာ cuevas ဟုသူကပြောသည်
ငါတစ်ခုအတွက်အရင်းအမြစ်တွေအလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုပါစို့ဒီအမြန်နှုန်းတစ်ခုကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါအောင်မြင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အကယ်လို့သင်အမေရိကန်ကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးလိုက်ရင်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။ ဒီ RANGE အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုရယူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မဟုတ်
oscar cuevas အားစာပြန်ပါ
Zoar Rojas ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ငါအိပ်မက်မက်လို့အိပ်မက်မက်ခဲ့လို့ဆဲလ်ဖုန်းကအံ့သြစရာတွေကိုငါကြားခဲ့ရတယ်၊ ဒါကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်ဆဲလ်ဖုန်းမရှိပါ - (၁) ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်ငွေမရှိပါ။ - (၎င်းသည်အနိုင်ရခြင်းသည် ၀ မ်းသာဖွယ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ပါ ၀ င်ပါ။ သင်၏ရုပ်သံလိုင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
Zoar Rojas အားပြန်ပြောပါ
ငါနိုင်ရင်………… zoarrojas@outlook.com :,) ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးသား။
စာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်နောက်လိုက်များစွာရှိလိုလျှင်၎င်းသည်အချက်နှစ်ချက်ကိုလုပ်နိုင်သည်။ ကောင်းသောအရာများပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်ကောင်းသောအရာများပြုလုပ်သောကြောင့်လူများလာရန်ဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ် chinorris မိုဘိုင်းကိုမိတ်ဆွေများနှင့် / သို့မဟုတ်ကြိုက်နှစ်သက်စေရန်လုပ်ခြင်းဖြင့်ရှောင်ကွင်းခြင်း သူတို့ကို။ ဒီပစ္စည်းကကုန်ကျမယ့်ယူရို ၈၀ အတွက်သင့်မှာနောက်လိုက်အသစ်တစ်သောင်းရှိမယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ပတ်လည်။
Ana Belen Martin ဟုသူကပြောသည်
Ana Belen Martin ကိုပြန်သွားပါ
Jota Gar ဟုသူကပြောသည်
ငါ Facebook တွင်ပါ ၀ င်သည်၊ မျှဝေသည်
Jota Gar သို့စာပြန်ပါ
- ose Ayose ̖́- (@HumaWorld) ဟုသူကပြောသည်
reply to - ̗̀ Ayose ̖́- (@HumaWorld)
Sofi miline ဟုသူကပြောသည်
Sofi Miline အားစာပြန်ပါ
Hugo Marques ဟုသူကပြောသည်
androidsis သည်နည်းပညာအသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသတင်းပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်၏တူတွင်ခြစ်ထားသောမျက်နှာပြင်ပါသောလက်ကိုင်ဖုန်းရှိပြီး၎င်းကိုခရစ်စမတ်အတွက်ကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Hugo Marques အားပြန်ပြောပါ